Vaovao - Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny ravina vita amin'ny vy sy ny vy tsy misy vy
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny ravina vita amin'ny vy sy ny vy tsy misy vy
Ny takelaka vy nandrisika dia ny hisorohana ny lobolan'ny vy matevina ho harafesina ary hampitombo ny fiainany ilaina. Ny velaran-takelaka vy matevina dia hosaronan'ny sosona metaly metaly metaly, ary ity karazana zinc mifono takelaka vy miharo mangatsiaka ity dia antsoina hoe lovia nandrisika.
Ny vokatra vita amin'ny vy vita amin'ny vy mihosina dia azo ampiasaina amin'ny indostria maro samihafa:
1. Orinasa mpamokatra toy ny fananganana injeniera, indostria maivana, fiara, fambolena, fiompiana, jono sy indostrian'ny serivisy ara-barotra.
2. Indostrian'ny fanamboarana izay mila mamokatra vokatra tsy azo harafesina na tafo vy miloko fananganana indostrialy sy tafo Grid.
3. Manampy ny indostrian'ny metalika hamokarana kojakoja ao an-tokantrano, fivoaran-tsetroka sivily, kojakoja ao an-dakozia, sns.
4. Indostrian'ny fiara izay mila mamokatra kojakoja mahazaka fahasimban'ny fiara, sns.
Ny asa lehibe amin'ny fambolena, fiompiana ary ny jono dia ny fitehirizana, ny fitaterana ary ny hatsiaka ho an'ny hena sy hazan-dranomasina, sns .Ny serivisy ara-barotra dia zava-dehibe amin'ny fitehirizana sy fitaterana ny entana, kojakoja fonosana sns.
Ny takelaka vy dia mampiseho ny fanoherana ny gazy, etona, rano ary zavatra maloto maloto hafa rehetra ary asidra, alkaly, sira ary akora simika simika ara-simika organika hafa harafesina vy, anarana iray hafa ho an'ny vy tsy misy fangarony dia vy mahatohitra asidra. Amin'ny fampiharana, ny vy mahazaka harafesina dia antsoina matetika hoe takelaka vy tsy misy fangarony, ary ny vy mahazaka harafesina dia antsoina hoe vy mahazaka asidra.
Ny takelaka vy dia matetika mizara ho sokajy maromaro, ao anatin'izany ny austenitika vy, vy feritika, vy feritika, feritika - rafitra metallographic (dingana roa) takelaka vy tsy misy fangarony ary takelaka vy tsy misy fangarony Hardbottom. Ho fanampin'izany, raha ny fitambarana, dia azo zaraina ho takelaka vy tsy misy fangarony chromium, takelaka vy tsy misy fangarony chromium ary takelaka vy tsy misy fangarony manganese chromium.